LibreOffice 7.1.6 yasvika ichigadzirisa huwandu hwe44 bugs | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi nehafu mushure yapfuura kugadzirisa dzakarukwa, Iyo Gwaro Foundation Yakazivisa masikati ano kuvhurwa kwe LibreOffice 7.1.6. Ichi chingave chekupedzisira kugadzirisa kugadzirisa kweiyo 7.1 akateedzana, kunyangwe ivo vachigona zvakare kuburitsa mashoma mashoma mune ramangwana kana vakawana hombe bug kana kukanganisa kwekuchengetedza kunoda kugadziriswa. Panguva ino, TDF inoenderera ichikurudzira dzino dzakateedzana zvemidziyo yekugadzira, uye chikonzero ndechekuti yakanyanyisa kupenya kupfuura iyo 7.2.
Pakazara, muLibreOffice 7.1.6 44 bugs yakagadziriswa izvo zvinoita kuti zvese zvive zvakavimbika, zvishoma zvichienzaniswa nezvimwe zvaburitswa, asi zvinonzwisisika pakuve yekuvandudzwa kwenzvimbo yechitanhatu. Shanduko dzakanyorwa mune zvinongedzo pa yekutanga (40) uye wechipiri RC (4) ye7.1.6, kunyangwe panguva ino ivo vasina kana chavakataura nezvekuvandudza kuenderana neMicrosoft Office.
FreeOffice 7.1.6 inogona kunge iri yekupedzisira vhezheni iyi
Ino nguva ivo havana kutaura kuti iyi ndiyo vhezheni yavanokurudzira kana kudzikama kuchidikanwa, asi vanoiisa pane peji rekurodha rehofisi suite. FreeOffice 7.2 inowanikwa kubva pakati paAugust, uye ivo havazoikurudzire kumatimu ekugadzira kudzamara varegedza kanokwana kana mapoinzi ekuvandudza, ayo anowanzoitika mushure mechishanu.
Izvo zvavasina kuita kupotsa mukana wekuyeuchidza zvakare izvo kune zvakare Enterprise vhezheni, iine rutsigiro rwakagadziridzwa uye pane-zvinoda maficha. Iyo vhezheni yatinodhawunirodha semazuva ese yakaitika kuve neCommunity tag, uye ndiyo nharaunda ichagadzirisa kusahadzika kwedu kana tikabvunza mumaforamu avo.
Zvemabhizimusi-kirasi deployments, TDF inokurudzira zvikuru iyo LibreOffice Enterprise mhuri yezvikumbiro kubva kune ecosystem vadyidzani, ine yakareba-nguva yekusarudzika sarudzo, rutsigiro rwehunyanzvi, tsika maficha, uye chibvumirano cheyero yebasa.
LibreOffice 7.1.6 yakatangwa nguva shoma yadarika uye ikozvino unogona kurodha pasi kubva pawebhusaiti yako. Vashandisi veLinux vanogona kurodha pasi DEB neRPM mapakeji, asi imwe yesarudzo dzakanakisa kumirira kugoverwa kwedu kuti tiwedzere mapakeji nyowani kumatura avo epamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » LibreOffice 7.1.6 yasvika ichigadzirisa huwandu hwe44 bugs